Lihlehlile elokubulawa kukaYende namuhla | News24
Lihlehlile elokubulawa kukaYende namuhla
Johannesburg - Indoda eboshelwe ukubandakanyeka esigamekweni sokubulawa kwesisebenzi sakwa-Eskom, uThembisile Yende, ivele kafushane eNkantolo yeMantshi yaseSprings e-East Rand, eGauteng.
Isidumbu sikaYende esasesonakele satholwa ehhovisi elalikhiyiwe kwa-Eskom eSprings ngenyanga edlule, sekuphele izinsuku ezingaphezu kweziyishumi kwabikwa ngokuduka kwakhe.
Amaphoyisa athi wabulawa.
OLUNYE UDABA:Amaphoyisa aqinisekise ukuthi uThembisile Yende wabulawa
Le ndoda eneminyaka engu-43 ubudala, ithweswe icala lokubulala uYende yaboshwa ngoLwesine olwedlule eCarltonville, entshonalanga yeGoli.
Okhulumela amaphoyisa uJohannes Ramphora uthe: " Kubonakala sengathi umsolwa uyinkabi eyaqashelwa ukuba iqede ngomufi...kodwa asinaso isiqiniseko salokho, uphenyo lusaqhubeko ngoba sisafuna abanye abasolwa."
Umsolwa unqatshelwe ibheyili kanti icala lihlehliselwe uMsombuluko ozayo.
Imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu itshengisa ukuthi uYende walimala ekhanda wathola namanxeba emqaleni ngaphambi kokushona.